झन्डै साढे २ महिनापछि स्वदेश फर्किँदै झलनाथ खनाल, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ? — Sanchar Kendra
झन्डै साढे २ महिनापछि स्वदेश फर्किँदै झलनाथ खनाल, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सोमबार स्वदेश फर्किने भएका छन्। गत असार २ गते उपचारका लागि भारतको नयाँदिल्ली गएका खनाल सोमबार दिउँसो काठमाडौं आइपुग्ने उनका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए।
‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि स्वदेश फर्कन लाग्नुभएको हो,’ भट्टराईले भने। नयाँदिल्लीमा खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। सुरूमा थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएका खनाललाई थप उपचारका लागि दिल्ली लगिएको हो।
खनाल दिल्ली जाने बेलामा नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। जाने दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै खनालले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका थिए। पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच विवाद चुलिएर एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो।
एमाले विभाजनमा खनाल नेपालतिर गएका थिए। नयाँदिल्लीबाटै उनले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा राजदूतावासमार्फत् सनाखत गरेका थिए।